COVID-19: Faafida Corona iyo Baraha Bulshada | Martech Zone
COVID-19: Corona Faafida iyo Warbaahinta Bulshada
Waxyaabaha badan ee isbeddelaa, waxay sii ahaanayaan sidii hore.
Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan warbaahinta bulshada: uma baahnid inaad xirto waji-waji. Waad nuugi kartaa wax kasta waqti kasta ama wakhti kasta sida dhacaya inta lagu jiro xilliyadan 'COVID-19'. Aafada ayaa meelo gaar ah galisay feejignaan fiiqan, fiiqay geesaha wareegsan, balaarisay jahawareerka, isla mar ahaantaana, kala furfurmay meelaha qaar.
Musqulaha sida dhakhaatiirta, dhakhaatiirta caafimaadka, iyo kuwa quudiya masaakiinta waxay ku sameeyaan iyagoo afka ka xidhaya waji dabool. Kuwa ay sida xun u saameeyeen aafada oo aan lahayn waxbarasho waxay helayaan wado ay ugu adeegsadaan baraha bulshada si ay adduunka ugu ogolaadaan inay maqlaan qeyladooda muuqaalka gaajada. Baruurta sida wanaagsan loo cuno waxay wadaagaan cunnooyinka waxayna adeegsadaan warbaahinta bulshada si ay u muujiyaan sida ay waqtiga u dhaafinayaan.
Maxay Baraha Bulshada u Qabanayaan Faafida?
Facebook sida lagu sheegay wuxuu ku deeqay 720,000 oo waji facmaal ah wuxuuna balan qaaday inuu soo saari doono wax badana keeni doono. Waxay samaysay ballan qaad ah inay ugu deeqaan $ 145 milyan shaqaalaha caafimaadka iyo ganacsiyada yaryar.
Whatsapp abuuray a Xarunta macluumaadka Coronavirus ayaa u ogolaatay WHO inay bilawdo sheeko si dadka looga digo halista coronavirus. Waxeey heesataa ayaa la sheegay inay ku yaboohday 1 milyan oo doolar ilaa Shabakada Xaqiijinta Caalamiga ah ee Machadka Poynter si loo taageero xaqiiqda coronavirus isbahaysiga ka jira 45 dal iyada oo loo marayo 100 urur maxalli ah. Waxaa jira a 40% kororka Whatsapp Isticmaalka.
Instagram waxay u baahan tahay in lagu ammaano qaadista tillaabooyin looga hortagayo faafitaanka macluumaad khaldan.
Twitter isticmaaleyaashu way kordheen tiro ahaan qiyaastii 23% saddexda bilood ee ugu horreeya sannadka 2020 iyo madalku wuxuu mamnuucayaa tweets-ka saamaynta ku yeelan kara faafitaanka coronavirus. Twitter wuxuu ugu deeqayaa 1 milyan oo doolar Gudiga Ilaalinta Saxafiyiinta iyo Ururka Haweenka Caalamiga ah ee Warbaahinta.
LinkedIn wuxuu furay 16 koorso waxbarasho in adeegsadayaashu ay ku heli karaan bilaash waana daabacaadda talooyin ku saabsan ganacsiga waxa ay tahay inay soo dhigaan inta lagu jiro aafada socda.
Netflix wuxuu balan qaadayaa waxyaabo cusub si dadka looga dhigo madadaalo inta lagu jiro qufulka la xoojiyay.
Youtube ayaa xoogaa ku qabanaysa xaddidg xayeysiisyada la xiriira ku socota Coronavirus.
Nooc tirakoob la sameeyay taas oo muujineysa COVID-19 iyo ereyada la xiriira coronavirus ayaa lagu xusay in ka badan 20 milyan oo jeer baraha bulshada, wararka, iyo bogagga TV-ga.
Liistadu way sii socotaa Snapchat, Pinterest, iyo kanaalada kale ee warbaahinta bulshada oo hoos udhaca. Taasi waa wax wanaagsan laakiin sidee dadku u isticmaalayaan warbaahinta bulshada inta lagu jiro aafada?
Wanaaga Baraha Bulshada
Dadku waa inay guryahooda qasab ku joogaan taasna waxay keenaysaa in waqti badan lagu qaato baraha bulshada. 80% dadku waxay isticmaalaan waxyaabo badan halka 68% isticmaalayaashu ay raadiyaan waxyaabaha la xiriira faafa. Nasiib wanaagse, maahan in qof walba waqtiga iska dhaafaayo.
Tiro yar oo muwaadiniin ah oo danaynaysa ayaa abuuray shabakad bulsheed oo ay ku bixiyaan oo ugu qaybiyaan cunnada guriga lagu kariyo ee dadka baahan iyada oo ay u dheer tahay inay tilmaamayaan goobo hoy iyo daryeel caafimaad oo aasaasi ah dadka baahan ee ku nool magaalooyinkooda. Tusaale ahaan, koox dad ah oo fadhigeedu yahay Mumbai ayaa bilaabay inay adeegsadaan dhaqaalahooda si ay ugu karsadaan cuntada una u qaybiyaan dadka baahan. Waxay ku kortay khad gargaar iyo degel ay dad badani ku biiraan waxqabadka magaalooyinka kale.
K Ganesh oo ah Basket-ka Weyn, Juggy Marwaha oo ka tirsan JLL, iyo Venkat Narayana oo ka tirsan kooxda Prestige Group ayaa bilaabay bilaabid FeedmyBangalore si loo caawiyo dhaqaale ahaan liidata inta lagu jiro cudurkan faafa ee Covid19. Waxay siin doonaan cunno qiyaastii 3000 oo carruur danyar ah iyo qoysaskooda Hay'adda 'Parikrma Humanity Foundation'. Ujeedadoodu waa in ay u adeegaan 3 cunto lakh inta lagu guda jiro cakiran ee.
Heerka sawir: JLL
NGO-yada waxay ku dadaalayaan sidii ay u bixin lahaayeen cunno, fayadhowrka, xirmooyinka cuntada, iyo maaskaro maaskaro inta lagu jiro xirnaanshaha aafada.
Dadka caanka ah ayaa ku jahawareera talo aan macquul ahayn oo ku saabsan sida loo badbaado loona ilaaliyo. Waxaa loo maleynayaa in dadku ay u dhego nugul yihiin talooyinka markay ka timaado dadka caanka ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo xun, sidoo kale.
Xun Xun Baraha Bulshada
Marka ay jirto gaajo baahsan oo dadku gaajoonayaan waxaa jira dad caan ah oo ka faa'iideysta baraha bulshada si ay u muujiyaan cuntooyinka qalaad ee ay diyaarinayaan si waqti looga dhigo.
Ma ahan oo keliya in Hindiya laakiin dunida ka badan, gaar ahaan Maraykanka iyo Yurub, Muslimiinta ayaa dhamaadka aqbaliddoodii of posts nacaybka ku eedeeyay beesha oo dhan, waayo, caamka ah. Wararka been abuurka ah iyo fiidiyowga, iyo sidoo kale qoraallada kicinta ah, ayaa sii kordhaya, taas oo ah wax laga xumaado.
Xisbiyada siyaasaddu waxay isku dayaan inay cows samaystaan ​​inta qorraxdu QORATO. Waxay muujin karaan xoogaa xasaasi ah halkii ay siyaasadayn lahaayeen fayraska.
Sidii caadada u ahayd kuwa damiir laawayaasha ahi waxay ka faa'iideystaan ​​baraha bulshada si ay ugu riixaan daaweyn been abuur ah oo ka halis badnaan karta COVID-19. Qaarkood waxay rabaan inay ganacsi ka dhigtaan fursadda. Qaar kale waxay bixiyaan talo ama warar marin habaabin kara sida: Shiineysku waxay si ula kac ah u qorsheynayaan inay cudurka adduunka ku qaadaan oo ay la wareegaan…, Siti biyo mari oo luqluqo si aad u maydho fayraska…, Cun toon ceyriin ..., Isticmaal kaadida lo'da iyo digada lo'da, Nalalka iyo shumacyada shido oo foox u shid si ay uga saaraan corona… Carruurtu ma qaadi karaan… iyo wixii la mid ah. Kadibna waxaa jira dad bixiya barnaamijyo raadraac corona ah oo ay ku jiraan furin.
Madaxa foosha xun ee wadajirka wuxuu meel wanaagsan ka helayaa baraha bulshada khilaafkuna wuxuu u eg yahay inuu sii jiro muddo dheer ka dib markii coronavirus-ka uu libdhay ama yaraaday.
Suuqgeynta Taabashada Aadanaha
Quruxda baraha bulshada ayaa ah inaad si gaar ah diirada u saari karto sare u qaadida sumcadaada iyo sumcadaada waxaadna ugu isticmaali kartaa si is dhexgalka bulshada. Suuqgeyntu maanta wax yar ayey u bedeshay mowqifkeeda si loogu daro patina biniaadanimo waxqabadkeeda.
Shirkadaha hadda waxay adeegsadaan warbaahinta bulshada si ay u muujiyaan walaaca macaamiisha waxayna u fidiyaan inay ka caawiyaan si kasta oo ay awoodaan, ma ahan oo keliya caawimaad la xiriirta wax soo saarka. Waqtigaani waa xilli la abuuro kalsooni, kor loo qaado kalsoonida, lana kobciyo cilaaqaadka. Shirkadaha daryeelaya ayaa sidaas samaynaya. Kasbo niyad wanaag maanta. Waxay u turjumi doontaa dakhliyada hadhow maxaa yeelay dadku way xusuustaan.
Suuqgeyaasha dijital ah waxay isticmaaleen ereyo muhiim ah oo toos ah oo laga soo qaaday cilmi baarista. Hadda waa inay dib-u-baaraan ereyada muhiimka ah iyagoo xoogga saaraya ereyada la xiriira COVID-19 si loo abuuro saameyn ka duwan oo sheegista bartilmaameedyada. Mid waa inuu sidoo kale maanka ku hayaa raadinta Brandwatch ee ah dareenka ku xeeran fariimaha la xiriira fayraska corona inta badan waa diidmo.
Mid ka mid ah wax xusid mudan oo ku saabsan saamaynta faafa ee baraha bulshada taasi waa Youtube, Facebook, iyo Twitter inay ka shaqeynayaan sidii loo dimoqraadiyeyn lahaa macluumaadka isla markaana looga takhalusi lahaa qoraalo sumaysan.
Marka laga eego aragti balaaran, waxaa la dhihi karaa kuwa u adeegsada baraha bulshada inay wax wanaaqaan sameeyaan sidaas ayeyna sameynayaan kuwa u janjeera inay baraha bulshada u adeegsadaan xumaan. Aafada ayaa waxoogaa ka bedeshay baraha bulshada laakiin, sida ay yiraahdaan, wax badan oo isbadala, intay sii ahaanayaan ayey sii ahaanayaan. Waan ogaan doonaa, lix bilood kadib.
Tags: COVID-19xaqiiqda baaritaankaJuggy MarwahaK Ganeshnetflixmasiibokoox sharaf lehwarbaahinta bulshada xunbaraha bulshada wanaagsanTwitterWhatsAppyoutube
Hardik Oza waa xirfadle SEO ah oo leh khibrad ka badan 9 sano. Wuxuu ka caawiyaa shirkadaha inay kobciyaan ganacsigooda. Wuxuu la wadaagayaa fikradihiisa daabacaadaha dheeraadka ah sida SEMrush, Dadka Raadinta Mashiinka, iyo Warbaahinta Bulshada Maanta. Raac isaga on Twitter @Ozaemotion.